गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोग गर्दा गर्दै पनि किन हुन्छ गर्भाधारण ? - Kendrabindu Nepal Online News
गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोग गर्दा गर्दै पनि किन हुन्छ गर्भाधारण ?
लाइफ स्टाइल, समाज, स्वास्थ्य
गर्भनिरोधकको विभिन्न साधन मध्ये महिलाहरुले प्रयोग गर्ने साधन खाने चक्की पिल्स हो । यो ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सको सेवन गर्दा दम्पतिले आफ्नो इच्छा अनुसार गर्भाधारण गर्न सक्छन् ।
एक–दुई वर्ष जन्मान्तर राख्नको लागि पिल्स एक उत्तम उपाय हुन सक्छ । तर, गर्भनिरोधक चक्कीको सेवन गर्दा गर्दै पनि गर्भाधारण हुन सक्छ । ९९.९ प्रतिशत भरपर्दाे र विश्वासिलो मानिने पिल्स कहिलेकाही फेल हुन्छ । जसको पछाडि केही कारण हुन सक्छ ।
गर्भनिरोधक चक्कीले सेवन गर्ने महिलाको हर्मोन नियमित गर्छ । यसको साथै यस चक्कीको मुख्य काम भनेको ओभुलेसनमा (अण्ड निश्कासन) बाधा पुर्‍याउनु हो । जव महिलाको शरिर भित्र ओभुलेसन हुँदैन त्यसपछि गर्भाधारण पनि हुँदैन् । जुन महिलामा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थाइराइड, कलेजो, रगत सम्बन्धी समस्या छ यो औषधीको सेवन गर्नु अघि डाक्टरको परामर्श लिनु आवश्यक छ ।
स्त्री तथा प्रसुतीरोग विशेषज्ञ डा. बालकृष्ण शाहका अनुसार गर्भनिरोधक चक्की पिल्सको प्रयोग सहि समयमा सहि तरिकाले गर्नुपर्छ । यदि पिल्सको प्रयोग सहि प्रकारले गरिएन भने प्रभावकारी हुँदैन् । जुनसुकै ब्राण्डको गर्भनिरोधक चक्की आफ्नै तरिकाले प्रयोग गर्नु हुँदैन । डाक्टरको सल्लाहले मात्र यसको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
महिनावारी भएको ४ दिनबाट सुरु गर्नुपर्छ । सेतो रंगको २१ वटा र ७ वटा खैरो रंगको हुन्छ । एरोले देखाए अनुसार एकै समयमा दिनदिनै नबिराईकन एक–एक गोली खानुपर्छ । एउटै समयमा खाँदा शरिरमा हर्मोन राम्रोसँग रेग्युलेट हुन्छ ।
एउटा चक्की खाएर अर्को चक्की खाँदा २४ घण्टाको ग्याप हुनुपर्छ । एक दिन खान बिर्सेमा भोलीपल्ट सम्झनासाथ खानुपर्छ । अथवा सधैं खाने समयमा २ वटा चक्की एकै साथ खान सकिन्छ । २ दिनभन्दा धैरै दिन खान बिर्सेमा अन्य अस्थाई साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छः
कसैकसैले बाथरुममा या कारको बोनटमा औषधी राख्ने गरेको पाइन्छ । यस्तोमा गर्भनिरोधक गोलीको असर कम हुन्छ । गर्भनिरोधक चक्कीको प्रभावकारी यथावत् राख्नको लागि २५ डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा राख्नुपर्छ ।
यी हुन कारण
गर्भनिरोधक चक्की फेल हुनुको पछाडि अन्य कारणहरु पनि हुन्छ । पिल्स चक्कीको सेवन गर्ने वित्तिकै या केहि समयपछि वान्ता भएमा औषधीको असर शरिरमा हुँदैन् । यस्तोमा गर्भाधारण हुने सम्भावना बढि हुन्छ । वान्ता भएमा दोहोराएर औषधी खानुपर्छ । जुन महिलाको पाचन प्रणालीमा समस्या हुन्छ त्यस्ता महिलाहरुलाई पनि गर्भनिरोधक चक्कीको प्रभाव कम हुन्छ ।
कहिलेकाही महिलाको मेडिकल हिस्ट्री पनि गर्भनिरोधक चक्कीको निष्प्रभाव पार्छ । त्यसैले गर्भनिरोधक चक्कीको सेवन गर्नु पहिले डाक्टरसँग सल्लाह लिनु आवश्यक हुन्छ । साथै कुनै औषधीको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि बताउनुपर्छ ।
एन्टीबायोटिक, एन्टीप्रेसान्ट, एन्टी एच.आई.भी, एन्टी फगंल, सरफेम, रैपिफलक्स, जोलापट, कालेटा, प्रिजिस्टा, कार्बाटोल, ल्युमिनल, टिपिप्टल, फेलबाटोल जस्ता औषधीको सेवनले गर्भनिरोधक चक्कीको प्रभाव कम गर्छ ।
धूम्रपान गर्नु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ । यदि गर्भनिरोधक चक्कीको सेवन गर्दै धूम्रपान गरेमा औषधीको प्रभाव कम हुन्छ । यसको साथै स्ट्रोक र हार्ट अट्याकको सम्भावना पनि बढछ । निकोटिनले ब्लड प्रेसर र हार्ट रेटको बढाउँछ ।